Izikhumbuzo zobundlobongela: umfanekiso oqaqambileyo wokurhweba ngabantu | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | 01/09/2021 18:24 | I-Biography, Ababhali, Inoveli
Caphushwa nguBhebi Fernández
Iinkumbulo zesikhohlakali yinoveli ngumbhali waseValencian uBebi Fernández —Ms. Ndasela. Ipapashwe ngo-Novemba ngo-2018, kukuqala kombhali kolu hlobo, kunye nesicatshulwa esivula i-bilogy yakhe Ndalo. Umdlalo ubandakanya izihloko ezibuthathaka, ezinje ngokurhweba ngabantu basetyhini kunye nobundlobongela obuphathelele kwezesondo. UFernández usebenzisa intetho ethe ngqo nevulekileyo ukuveza uburhabaxa beli lizwe laphantsi kunye nendlela amaxhoba aphangwa ngayo inkululeko yabo kwaye banyanzelwa ukuba benze izenzo zobundlobongela nezimbi.
Nkosazana Bebi ungumfazi osebenzisa amanethiwekhi akhe asekuhlaleni -Twitter kunye ne-Instagram- ukunceda ngokufanelekileyo kule nto. Kuye, kubalulekile ukuba azifundise ngokulingana ngokwesini kunye nobufazi. Ngenxa yoko, uthi: "Sitshintsha uluntu nge-intanethi. Iinethiwekhi zentlalo ziyinjini yemfundo ekhohlakeleyo kwisizukulwana emva kwesam ”.
1 Imemori yesishwankathelo esibuhlungu
1.1 Ukuphoxeka okukhulu
1.2 Ihlabathi elinzima
1.3 Inyaniso entsha
1.4 Ukuhenyuza kunye nokuphathwa gadalala kwabasetyhini
2 Uhlalutyo lweMemoirs of Savage
2.1 Idatha esisiseko yenoveli
3 Malunga nombhali, uBebi Fernández
Isishwankathelo se Iinkumbulo zesikhohlakali
Ehlotyeni lama-96 emva kweminyaka elishumi elinesihlanu sikunye-, UJacobo noAna babelinde izibulo labo. Wayelangazelela eso sidalwa sasikho yindoda, ukuze kwixesha elizayo athathe ishishini losapho (ukurhweba ngeziyobisi), Umsebenzi ongalunganga kubafazi. Nangona kunjalo, Emva kokuzalwa, le ndoda yaziva ukuba zonke izicwangciso zayo ziyawa: yajika yaba yintombazana.
Umntwana wayenjalo Wabhaptizwa uKuAssandra -K-. Yakhe ndikhule embindini wendalo oqhelekileyo apho abafazi bekhathalela ikhaya kuphela. Intombazana entle-eyayinomlingiswa onzima kunye nokuzikholelwa okucacileyo- yayinamafu okhuliso apho utata wakhe wabangela usizi olungaphezulu kolonwabo.
Xa uK wajika i-19, uJacobo wagwintwa. Umnyhadala onokuthi uthethe ukuphuma kwilizwe elibi lomfazi omncinci, ubangele iimeko ezibi ngokupheleleyo.
Iinkumbulo zesikhohlakali: ...
Umphathi wapheliswa yenye yeefiyaas awayesenza ngazo ushishino, konke ngenxa yokuqokelelwa kwamatyala. Ngaphandle kokucinga ukuba "izibophelelo" zagqitywa emva kokubhubha kukaJacobo, U-Emil, inkokeli yeqela lolwaphulo-mthetho, wafuna ukuba uK kunye nomama wakhe bahlawule imali.
Zombini, ezingenamali, zingenise imiyalelo yomoni ukukhusela ubomi babo. Ngenxa, U-K kwafuneka asebenze njengommkeli kwenye yeendawo zakhe zokuthengisa, kude kube zihlawulwe iiakhawunti zakhe.
Ukuhenyuza kunye nokuphathwa gadalala kwabasetyhini
Kule den, uK wabona ubungqina obubi nobubi: inqwaba yabasetyhini baphathwa njengamakhoboka ... babethwa kwaye baphathwa gadalala mihla le. Bangabaphambukeli abakhohliswe ngengqikelelo "yekamva elingcono njengemodeli." Baxhwilwa, basuswa kunxibelelwano nabo babathandayo kwaye ukunyanzelwa kubunongogo ukuhlawula "ityala" yohambo olwalubavumela ukuba bafikelele "kwilizwe lesithembiso."
Yonke imihla, u-Emil kunye neqela lakhe - "amadoda anomkhenkce" - bagcina bonke abafazi behlaziswa. Nangona kunjalo, akukho namnye kubo owalahla ithemba. K wenqabile ukoyiswa yimafiake uthathe isigqibo sokubhalisa kwiiklasi zokuzikhusela. Kwakunje weza ejimini kaRam, ingcali encinci enomtsalane krav magá, owamyalelayo kobu bugcisa bokulwa.
Phakathi kuka-K no-Ram bekukho unxibelelwano kwangoko, Nangona kunjalo, waxhathisa ukuthandana. Umfazi omncinci uphuhlise ukuphambuka okunjeya emadodeni kangangokuba kwakunzima kuye ukuthembela komnye. Kwinxalenye yayo, URam ebengenabo nobomi obulula, kwaye uyayazi indlela yokuchonga uxhatshazo, ke lumka xa usondela kuye. Ithi i-nexus idibanise umfanekiso oqinisekileyo Apho kuvela khona olunye uthotho lweziganeko ezinzima nezingalindelekanga ezikhokelela kwisiphumo.
Uhlalutyo Iinkumbulo zesikhohlakali
Idatha esisiseko yenoveli
Iinkumbulo zesikhohlakali inexabiso lilonke Amaphepha ayi-448, yahlulwe yaba Izahluko ezi-14 ngomxholo ophakathi. Yi ibaliswa ngumntu wesithathu; UFernández usebenzisa i ulwimi olucacileyo nolomeleleyo. Iyelenqe liyavela kwi isingqisho se-fluid esandayo ide idenhe.
Yintombazana entle entle, inebala elimhlophe namehlo aluhlaza akhazimla ngobuhle bayo. Wakhulela kwindawo emanyumnyezi, ejikelezwe zizenzo ezingekho mthethweni kunye nabantu abakhohlakeleyo abamenzakalisileyo ukususela ebusaneni. Nangona kunjalo, inamandla amakhulu; Umoya wakhe ongxamisekileyo wamvumela ukuba ajongane ngesibindi nobomi obamchukumisayo emva kokubhubha kukayise. Akayi kuphumla de ubulungisa benziwe kuye nakwamanye amaxhoba e-Icemen.
Ungumninimzi omncinci ongumdyarho womdlalo wamanqindi. Usebenze i-krav magá iminyaka. Ngaphandle kokuba ungumhlohli, kugcinwa ezona ndlela zinobungozi neziyingozi. Ukudibana no-K, uyabethwa bubuhle bakhe, kodwa kwangaxeshanye exhalabele impilo-ntle yakhe emva kokubona uthotho lwemivumbo eluswini. Ngaphandle kokwazi, inyani yokuba ungqamene naye ibeka ubomi bakhe emngciphekweni.
Umbhali ikwazile ukunika iinkcukacha ngokunzulu abalinganiswa, ukuba nganye kuzo inobunzima obulinganiselweyo, akukho "zigcwalisi". UFernández wagxininisa ngokukodwa kumabali abantu ababhinqileyo. Phakathi kwabo kukho: Katia, Bruna, Marcela, Maisha, Polina no Aleksandra; Onke amantombazana asemzini abalisa ngobomi babo kulo lonke eli yelenqe.
U-Bebi Fernández uphakamisa ilizwi lakhe kwaye ubeka umzekelo ophawulekayo ngokurhweba ngabantu kunye nobukhulu bokuxhatshazwa ngokwesondo. Ngaphandle kokuba libali eliyintsomi, ibonisa inyani ebuhlungu yokuba uninzi lwabasetyhini bahlala eSpain. Umbhali, uluntu luyayifulathela le meko; Kule meko, ugcina: "Ndifuna ukunika ilizwi kule ngxaki ithile kuba ukuthula kuyo kuyabonakala kum."
Kumsebenzi wakhe wolwaphulo-mthetho, umbhali uzibonile iziphumo ezibi zobukhoboka besini. Yayingukuchasa kwakhe uburharha okwamkhokelela ekubeni afake yonke into kwimisebenzi yakhe emibini yokubhala. Ngamava akhe kwezi ntlobo zolwaphulo-mthetho, wathi: “Ndiyayazi indlela abasebenza ngayo kwaye akukho mthetho okanye mthetho ungabanqandayo. Iyakwenza ukuba iphelelwe ngabathengi kuphela ”.
Ujonga ukuba imfundo ibalulekile ekupheliseni le mafiya kunye nolwaphulo mthetho. Ngokunxulumene noku, wathi: "Imfundo ngexabiso, ubukrelekrele bemvakalelo novelwano, ayiyintsika esisiseko, kodwa esona siseko sisisombululo ingxaki yexesha elide yobundlobongela obujoliswe kwabasetyhini ”.
Malunga nombhali, uBebi Fernández
UBebi Fernández, owaziwa ngegama elinguSrta. UBebi, wazalelwa eValencia ngo-1992. Wafunda iCriminology ngokukhethekileyo kubundlobongela obuphathelele kwezesini, ulwaphulo-mthetho oluhleliweyo, kunye nongenelelo lolwaphulo-mthetho kunye nolwaphulo-mthetho. Ungumntu olwela amalungelo abantu, uyathandwa kakhulu kwiinethiwekhi zentlalo. Ngaphezulu kwesigidi esinesiqingatha sabalandeli, yenye yezona mpembelelo zaziwayo zobufazi eSpain.
Njengombhali, waqala kwihlabathi loncwadi ngeencwadi kwiprozi yesihobe: Uthando kunye nezothe (2016) kunye Ayinakulunga (2017), zombini zidayari azenzileyo ebusheni bakhe. Ukuqala kwakhe ukuba ngumlobi wenoveli kwenziwa ngo-2018 ngebali lobufazi Iinkumbulo zesikhohlakali. Kwiminyaka emibini kamva, emva kokuphumelela kwale noveli yokuqala, ndiyaqhubeka nomxholo ofanayo kwaye ndazisa: ukumkanikazi (2021).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli » Iinkumbulo zesikhohlakali